အမေရိကန်ရေတပ်ပြင်ပတွင်တစ်ခုတည်းသော နျူကလီးယားစွမ်းအင်သုံးလေယာဥ်တင်သင်္ဘော Charles de Gaulleပြင်သစ်လေယာဥ်တင်သင်္ဘောကြီ
အမေရိကန်ရေတပ်ပြင်ပတွင် တစ်ခုတည်းသော နျူကလီး ယားစွမ်းအင်သုံးလေယာဥ်တင်သင်္ဘော Charles de Gaulleပြင်သစ်လေယာဥ်တင်သင်္ဘောကြီး၏ hull no. R91ဖြစ် ကာ ပြင်သစ်ရေတပ်၏ အလံဆောင်စစ်ရေယာဥ်(flag ship)လည်း ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၁ မှ တပ်တော်ဝင်အသုံးပြုသော လေယာဥ်တင်သင်္ဘောကြီးတွင် Crew – ၁၁၅၀ ဦး၊ Aircrew – ၅၅၀ ဦး၊ Flag staff – ၅၀ ဦး၊ Marines – ၈၀၀ ဦး၊ စုစုပေါင်း ၂၅၅၀ ဦး လိုက်ပါအမှုထမ်းသည်။
အလျား ၂၆၁. ၄၂ မီတာ၊ ဗျက် ၆၄. ၄ မီတာ နှင့် ရေစူး ၈. ၅ မီတာ အရွယ်အစားရှိကာ ဝန်ပြည့်တန်ချိန် ၄၀၆၀၀ တန် ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။ တွန်းကန်အားအတွက် တစ်လုံးလျှင် 300 MW ရှိသော နျူကလီးယားဓာတ်ပေါင်းဖို ၂ လုံး နှင့် 56.8 MW ရှိ ဂတ်စ်တာဘိုင် ၂ လုံးကို အသုံးပြုကာ နျူကလီးယား ဓာတ်ပေါင်းဖိုမှာ ပြင်သစ်ရေတပ်ရှိ နျူကလီးယားရေငုပ် သင်္ဘောဖြစ်သည့် Le Triomphant class ၏ reactor units နှင့်တူညီမှုရှိသည်ဟုဆိုသည်။
လေယာဥ်တင်သင်္ဘောတွင် Rafale-M ဘက်စုံသုံးတိုက် လေယာဥ် ၃၄ စီး၊ လေယာဥ်တင်သင်္ဘောအခြေပြု ဝေဟင် ကြိုတင်သတိပေးလေယာဥ်ဖြစ်သော E-2C Hawkeye ၂ စီး နှင့် ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးရဟတ်ယာဥ် SA-365F Dauphin သို့မဟုတ် ပို့ဆောင်ရေးရဟတ်ယာဥ် AS-322 Cougar ၂ စီး တင်ဆောင်ထားသည်။
လေယာဥ်/ရဟတ် ယာဥ် ၂၀- ၂၅ စီး အထိ သိုလှောင်ရုံ(Hangar) ထည့်သွင်း တည်ဆောက်ထားကာ တင်ဆောင်ထားသည့် လေယာဥ်/ ရဟတ်ယာဥ် ထက်ဝက်ခန့် သိုလှောင်နိုင်သည်။လက်နက် တပ်ဆင်မှုအနေဖြင့် Aster ဒုံး ၁၅ စင်း ကို ဒေါင်လိုက်ပစ်လွှတ်သည့် Sylever Octuple VLS launchers ၄ စုံ၊ Mistral ဝေဟင်ပစ်ဒုံးအတွက် Sadral sextuple launchers ၂ စုံ နှင့် Giat 20 mm guns ၈ လက် ဖြစ် သည်။
credit – KokolinnOo
Previous Article တင်းမာမှုများမြင့်တက်နေချိန်တွင်ကမ္ဘာ့အရေးကိစ္စများတွင် အသာစီးနေရာမယူရန် တရုတ်က အမေရိကန်ကို သတိပေး
Next Article ရုရှားနိုင်ငံရဲ့အင်အားအကြီးဆုံးလက်နက်(၁၀)ခု